KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Madaxweynaha Soomaaliya “Majiro Qilaaf nagala dhexeeya dowlada Kenya”
Thursday 13 December 2012 06:31
Madaxweynaha Soomaaliya “Majiro Qilaaf nagala dhexeeya dowlada Kenya”
Muqdisho (KON) - Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya dowladiisa iyo waliba dowlada Kenya, wuxuuna sheegay in uu yahay mid wanaagsan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu sheegay in uusan jirin wax khilaaf ah oo xilgaan kala dhaxeeya dowlada Kenya dowlada Soomaaliya, asgoona xusay Kenya in ay ka mitahay dowladaha caawinaya Soomaaliya.
Wuxuu sheegay madaxweynaha asagoo ka hadlayay arinta maamul u samaynta Jubooyinka iyo kaalinta dowladadaha dariska in Kenya iy dowladaha kale ay ogyihiin in jubooyinka ay ka midyihiin Soomaaliya maamulkooda uu noqonayo mid ka imaada dowlada.
Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu intaasi ku sii daray hadalkiisa in dhowaan uu booqan doono magaalada Nairobo ee dalka Kenya.
Dowlada Kenya ayaa waxay ka mitahay dowladaha Soomaaliya u soo diray ciidanka waxaana sidoo kale dowlada Kenya ay haatan doonaysaa in ay faragalin ku yeelato maamul u samaynta Jubooyinka.